Jowhar.com : Somali Leader News - News: Al-Shabaab oo go'doomiyay degmada Xudur, sahaydii iyo gaadiidka raashinka u diiday inay galaan
April 24 2014 09:42:45
Al-Shabaab oo go'doomiyay degmada Xudur, sahaydii iyo gaadiidka raashinka u diiday inay galaan
Wararka ka imaanaya degmada Xudur ee xarunta Gobolka Bakool ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay go'doomiyeen degmadaas oo todobaad ka hor la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ee AMISOM.
Al-Shabaab ayaa u diiday inay degmada galaan wax gaadiid sahay iyo raashin sida, iyadoo ay keentay inuu sare u kaco qiimaha maciishada lagu iibsado.
Gudoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Axmed Tool ayaa sheegay inay ka war hayaan go'doominta Al-Shabaab ee degmada, isagoo u hanjabay ganacsatada iyo gaadiidleyda alaabaha ganacsi wada ee ka weecda Xudur.
"Waxaa u sheegeyna ganacsatada, hadii aysan gaadiidkooda soo marin Xudur inaan la wareegi doono gaadiidka, wixii raashin saarana aan u qeybineyno shacabka waa go'aan aan gaarnay"ayuu yiri Maxamed Macalin.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dhamaan gaadiidka shixnadaha ganacsi wada ay marin u yihiin Xudur, gaar ahaan kuwa gobolada ka yimaada, waxaana uu ku goodiyay in gaadiidkii la leexda Xudur ee ay arkaa ay tallaabo ka qaadayaan, lana wareegi doonaan.
Al-Shabaab ayaa uga gol leh go'doominta Xudur in ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ee qabsaday degmada aanay wax sahay helin, iyagoo xoogagooda ay ku sugan yihiin hareeraha degmadaas.
Arrintan midi-midi ku taaga ah ayaa waxaa ay saameyn ku yeelaneysa ganacsatada gaadiidka ee isaga kala goosha gobolada Bay iyo Bakool, waxaana labada dhinacba ay tahay mid culeyskeeda leh.
0 Comments · 2159 Reads
Jowhar.com742,317 unique visits